Kumhanyisa webhusaiti yakabudirira kunoreva kugara wakangwarira kukanganisa senge mapeji akaputsika kana kuita kunonoka. Nekudaro, dzimwe nguva pane matambudziko ausingakwanise kudzivirira, uye makumi mana nemakumi mana ezvimwe zvikanganiso zvacho.
A 404 inoitika kana mushandisi akakumbira peji pane yako webhusaiti iyo isipo, nekudaro achikanda 404 peji rekukanganisa zvichikurudzira vashandisi kuti vadzokere kunzvimbo chaipo. Hazvina mhosva kuti zviwanikwa zvingani zvaunoisa mukuona kuti webhusaiti yako haifi yakadzika… panogara paine mukana wekuti vashandisi vapedzisire pano.
Hazvina kunaka, asi chokwadi chehupenyu. Zvinoitwa nevashanyi pavanomhara pane peji risipo zvinogona kubva pane "kuzvitora zvishoma nezvishoma" kusvika "pakurasika zvachose pfungwa."
Kunyange pasina chinhu chaunogona kuita nezve yekupedzisira, iwe anogona gadzira zvinhu zvishoma zvishoma zvekurwadziwa nekuva nekanganiso yekugadzira 404 meseji. Izvi zvinogona kuita zvishamiso kuita kuti vashanyi vewebhusaiti yako vanyemwere kunyemwerera mune imwe mamiriro anoshungurudza.
Kuti utore yako website web design majusi anoyerera, iyi posvo inoratidza mamwe emapeji edu epamoyo akakanganisa. Ndinovimba, iwe uchakwanisa kutora mashoma mazano kuti snazz up yako wega 404 meseji.
Chii chinonzi 404 Kanganiso?
Kukanganisa makumi mana nematanhatu ikodhi yeHTTP yekukanganisa meseji kodhi zvinoreva kuti webhusaiti iwe yawaiyedza kusvika yaisawanikwa pane sevha. Iko kukanganisa kwevatengi-padivi, zvichireva kuti iyo peji rewebhu rakabviswa kana kufambiswa uye iyo URL haina kushandurwa zvinoenderana, kana munhu akangonyorwa muURL zvisizvo.
Kune chikamu chikuru, unogona kumisikidza server yako kuti igadzire yakagadziriswa 404 peji rekukanganisa. (Kana iwe uri mutengi weHubSpot, tinya pano kuti udzidze maitiro ekugadzirisa yako 404 peji muHubSpot.)
Mamwe akagadziriswa 404 mapeji ekukanganisa anosanganisira gamba mufananidzo, tsananguro yehunyanzvi, mepu saiti, fomu yekutsvaga, kana ruzivo rwekutanga rwekufona.
Iwo Akanakisa 404 Webhu Peji Mienzaniso
Kwemakore, mawebhusaiti akawana nzira dzakasiyana dzekuzivisa vashanyi nezve 404 kukanganisa uye vadzokere kunzvimbo chaiyo, zvimwe zvakapusa, zvimwe zvine hunyanzvi, uye zvimwe zvinonakidza. Ngatitangei nekutarisa pamapeji ekugadzira makumi mana nemazana mana, wobva watarisa mimwe mienzaniso inosetsa iyo ine chokwadi chekufadza chero munhu anouya kwavari.
Peji Risina Kuwanikwa: TK Yakagadzirwa 404 Mapeji Ekukanganisa
Nepo peji makumi mana nemakumi mana riine nyore kunamira kunze kubva pawebhusaiti, peji rePipcorn rekukanganisa rinoenderana zvakakwana nemamwe ese ekumaka saiti. Kune yakanaka animated kumashure, ine hushamwari mameseji anotungamira vashanyi kutsvaga webhusaiti (izere nehungwaru pun), uye chimedu chemaputi chinoshandiswa se "404" mu "0."
Mimhanzi inoyerera hofori Spotify yakafukidza mabhesheni ayo neine ungwaru 404 peji. Uine hungwaru kubvisa kabhuku kaKan West ka "808s uye Heartbreak" uye zvakarekodhwa kuchangamuka, webhusaiti yacho inovaraidza kwenguva pfupi uyezve inotumira vashanyi ku peji ravakabva.
Imwe nzira yakapusa yekudzora kusagadzikana pane yako 404 peji ndeyekuwedzera inokurumidza "Oops!" meseji - inobatsira saiti yako kuti inzwe seyakanaka paunenge uchitungamira vashandisi kudzokera kunzvimbo chaipo. Muchiitiko chesaiti yeGenially, iro peji rinosanganisirawo nifty fananidzo yakabatanidzwa neimwe yekutamba kopi.
Sezvaungatarisira, Adobe's 404 peji rekukanganisa rinobatsira uye rinotaridzika. Iyo inonyora kunze kwakakurumbira maficha ayo vashanyi vangangoda pamwe chete neanotonhorera madhijitari emifananidzo anoshanda seyekufananidzira fananidzo rakaputsika kana rakarasika peji. Kutendeseka, mawebhusaiti anofanirwa kushandisa madimikira anoonekwa kazhinji.
Iyo 404 peji reClorox yekuchenesa zvigadzirwa inotenderera pakati pemifananidzo mitatu isina moyo kuratidza kune vashanyi kuti vafamba zvisirizvo. Iko kushandisa kwakanaka kwekumaka kuwedzera pfupi pfupi nguva uchiri kubatsira varasikirwa vashandisi.
6. Duma Kubatana
Dzimwe nguva, ungangodaro usingade blitt yehunyanzvi - ingo taura vashanyi kuti hapana peji pakero uye rega vafambe. Varaidzo inomiririra agency Duma Collective inoita izvi chete neayo peji rekukanganisa.
Kutaura nezvekunaka, yekuzvitarisira brand Chillhouse yakaisa mune rekuwedzera basa kudzosera vashanyi vayo muchimiro. Iyo peji makumi mana nemazana mana yakamisikidzwa nenzira kwayo uye inototora vashanyi parwendo rudiki kuburikidza nemifananidzo mishoma yakamira vasati vadzokera ku Homepage.
Kana iwe ukapinda chisina kukodzera Bitly link, iwe uchaendeswa kuBitly's 404 peji. Isu tinofungidzira kuti izvi zvinoitika chiyero chakaringana, ndosaka iyo 404 peji rinosvika rakananga kunongedzo. Inotsanangura izvo zvingave zvakatadza uye zvinokurudzira vashandisi kuti vashanyire peji reBitly kana zviri izvo zvavari kutevera.
Ikea's 404 peji yakafanana minimalist asi ichiri kugona kunzvenga imwe smart branding imomo. Uyu muenzaniso unoratidza kuti ako ekukanganisa mapeji haafanire kujekesa kuti uwane poindi yacho, asi hapana chakaipa nekupinza kumwe kunakidzwa futi.
10. Moxie Dhizaina Co.
Chokwadi, "kufuridza Internet" inogona kunge iri hyperbolic, asi inotaurira vashanyi kuti Moxie Design Co haina kuzvitora zvakanyanya nekukwirisa kudiki senge ino. Zvakare, bhawa rekutsvaga rakaiswa nyore pasi kuzokutumira munzira yako.
Ah, iyo yakasarudzika "isu takarasa peji" hunyengeri. Zvekare, nzira iri nyore yekuburitsa makumi mana nemakumi mana usingaparadzanise vateereri vako. Kana iwe uri agency senge McKissack & McKissack iyo inogadzirisa kudyidzana kwevatengi, yakajeka uye yakapfupisa kopi yakakosha pamapeji ako ese saiti, kusanganisira mapeji ekukanganisa.
Wakambobvarura kuputira webhusaiti kuti uone zviri pasi? Ndiyo pfungwa yekuti CSS Tricks yaienda mune yavo 404 peji rekukanganisa. Izvi zvese zvine hungwaru uye zvinoyeuchidza izvo zviri pawebhu webhusaiti nezve: kushandisa kwakanaka kwepaira dhizaini.
13. Mitambo Yakanaka Yekare
Kune mamwe mawebhusaiti, iwe unosunungura kumberi kwekupedzisira uye kune… kungori kushaya nzvimbo kwenzvimbo. Iri peji ndere kungwara kunongedzera kuGOG Galaxy, inova Yakanaka Old Games 'yemuno vhidhiyo mutambo mutengi. Nekutenda, diki vhidhiyo mutambo mutambi uripo kupa vashanyi nzvimbo yekumhan'ara kukanganisa kana vachida.
Kune chimwe chinhu chakasiyana zvishoma, tarisa Canva's 404 peji. Iyo inosanganisira kwete chete yekukanganisa meseji, asi nifty tile puzzle vashanyi vanogona kutamba kune imwe pfupi varaidzo. Iko hakuna kukuvadza mukurega vashanyi vako vachinonoka kwemaminetsi akati, handiti?
Kufanana nenzira yaCanva, Innotech inoratidza mutambo wePong-esque pane yayo 404 peji kupa varaidzo pfupi. Mikana yekuti iwe urangarire webhusaiti seiyi. Uyezve, iyo yekunakidzwa dhiri inowedzera inoyevedza webhusaiti - zvakanyanya, kana iwe wapedza kutamba, enda kune peji reimba woitora yese mukati.
Vhidhiyo agency Myriad yasarudza quirky, pa-brand 404 peji dhizaini iyo inoteedzera yakasarudzika SMPTE mavara mabara anoonekwa pamatepi ekare nemaTV. Iko kusekesa kurasira kumatekinoroji ekare uchimiririra dambudziko razvino uno re peji risipo rewebhu.
Anozivikanwa nezvenzira dzake dzakakurumbira dzekuchenesa uye kuronga uye mhando, Marie Kondo akaunza manzwiro akafanana kune yake webhusaiti peji 404. Iyo kopi muchidimbu uye zvinosetsa inoteerera kudzoka kwake kurongedza huzivi - diki asi rine musimboti wenyaya iyo vateveri vanozoziva.
Hausi iwo chete mufananidzo uri pane ino peji rekukanganisa wakatsanangurwa uye uchiita - iyo kopi yakangwara, futi. Tinoda kutaurwa kwenziyo yeSemisonic "Nguva yekuvhara": "Unogona kudzvanya chero kumwe kunhu, asi haugone kudzvanya apa."
19. Hot Dot Zvigadzirwa
Peji rekukanganisa raHot Dot rinoramba riri rechokwadi kunhamba yaro, "mharadzano yehunyanzvi hwekugadzira uye dhizaini." Iyo peji irikugaramirwa nemazana madiki madiki ayo anoshandura mafambiro mukupindura kwaunotamisa chako kora. Iko kufadza uye kuratidzira kukuru kweanogadzira dhizaini.
Kana iwe uchizopa mhosho meseji, wadii kufadza mushandisi kwemasekondi mashoma iwe uchivabatsira kunze? Kutevera kwaziso ine hushamwari, OrangeCoat inopa flowchart iyo inonyatso kubatsira vashandisi kuziva kuti nei vasvika pane peji rekukanganisa pakutanga.
Iri peji 404 rinoita zvinopfuura kudzosera vashandisi kumashure kune anoshanda mapeji. Panzvimbo iyoyo, peji ra404 raErvin & Smith rinokukoka kuti uderere pasi uye udzidze kuti nei uchida dhijitari rekushambadzira agency, uye nei kusarudza Ervin & Smith kunyanya, yakavharwa nefomu rekubatana. Ichokwadi kune basa rayo, ino agency inoratidza kuti chero peji inogona kuve mukana wekushandurwa.
22. ZuvaCloud Studios
… Kana, yako 404 inogona kungova nzvimbo yekutambisa nguva kweminiti, sezviri kuonekwa pawebhusaiti yeDayCloud Studios. Kufambisa iyo inotenderera yakatenderedza skrini inoratidzira 404 meseji yakavhenekerwa ne lasers kupfura kubva mumaziso ekati. Nekuti nei?
Chimwe chiitiko chewebhu webhusaiti zvine hungwaru kusanganisira yayo mameseji mameseji mune 404 peji - inotungamirwa yekufungisisa app Headspace inoita kuyedza kudzikamisa vashandisi, ichitikurudzira kutora mweya wakadzika, wozodzokera kunzvimbo huru.
24. Wildwood Bhekari
Mamwe mawebhusaiti kusvika parizvino akabatanidza akachenjedza akadhinda kopi mumapeji avo, nepo vamwe vakagadzira mitambo yepamhepo yakazara pavari. Asi, hapana chakakanganisika nekupusha pfupi kudzoka munzira kwayo. Saiti inonakidza yeWildwood Bakery inochengeta zvinhu zvipfupi uye zvinotapira (chaiko).
Peji Risina Kuwanikwa: TK Mapenzi 404 Mapeji Ekukanganisa
Dhizaini agency Astuteo's 404 peji iri chiyero chakaringana chezvakanaka zvekuona, kuseka, uye kubatsira. Iyo diki dhizaini inopa vashandisi ruzivo rwavanoda padivi pechimwe chinonakidza chinoonekwa, chikepe chinotakura zvinhu uye munhu anotiza.
Pane mashoma mazwi anodikanwa pane LEGO's 404 peji rekukanganisa - chimiro chemunhu chinojekesa zvese. Uyezve, vateveri veLeGO movie franchise vanonakidzwa nereferenzi inonakidza mukopi.
Mune ino inosetsa yekukanganisa meseji, Magnt anosekesa pachokwadi chekuti, hongu, vangadai vakaputsa chimwe chinhu - kana, haugone kunyora. Izvo zvinoonekwa zvinoshanda senzira yekukurumidza yekukurumidza kuratidza poindi yavo.
Peji yekukanganisa yeIconFinder iri nyore asi inofadza. Mascot ekambani akapfeka jasi uye achioneka akaneta inongedzo inodzokororwa kune vakarasika vashanyi. Hapana kunetsekana, nekuti saiti yacho inoratidzira zvimwe zvekubatana kwayo kushanyira pasi pazasi.
Sezviri pachena, timu iri kukambani yekubatsira yekurara Sweet Dreams yakatora zvakawandisa zvezvigadzirwa zvayo zvinoenderana neyewebsite 404 peji. Iri harisi iro chete peji rino rinosekesa - zvakare rinowirirana mushe nesosi yepamberi-kumagumo eesthetic uye mameseji ekunzwa kwakabatana.
Mutsetse "Aya haasi madhiri auri kutsvaga" anoreva Obi-Wan Kenobi's Jedi pfungwa yekunyepedzera paStormtroopers mu Nyeredzi Hondo Chikamu IV, uye chazova chirevo chinozivikanwa chinoshandiswa kutaurira mumwe munhu ivo vari kutevera isiri nzira yekuita. GitHub inotamba pane iyi inozivikanwa mutsara mune yavo 404 yekukanganisa meseji.
Tsika yaPatagonia 404 peji inotora iyo brand vibe zvakakwana, izere nevhidhiyo yeboomerang yefrisbee twirler, pun yakangwara inosanganisa "404" uye "aloha," uye inosangana kune ayo zvigadzirwa mapeji. Iyo ine hushamwari uye inosetsa nzira yekukwazisa vashanyi vanokuvadzwa munzvimbo isiriyo.
Tarisa uone kunze: Cloud Sigma iri kutitendera isu mukati meimwe kumashure-kwe-zviitiko chiitiko. Yadzo 404 peji rekukanganisa anoedzesera kunge "junior anovandudza peji rekutanga" - iye junior mugadziri ari, tsime, katsi.
33. AMC Theatre
Iwe unogona kunge wakambove kune AMC bhaisikopo yemitambo kare, asi iwe netariro hauna kumboona yavo webhusaiti 404 peji. Iyo webhusaiti inoshandisa yekukurumidza, inosetsa, uye inoenderana imwe-liner isati yakudzosera iwe kunzvimbo chaipo.
Hazvina kuitika kuti masangano ekugadzira akakura pakuuya nemapeji anotonhorera makumi mana nemakumi mana. Heino imwezve kubva kune vakasika kuBruno iyo inotamba ichibva muna 404 yechinamato yechinyakare Shamwari, iripi Mota Yangu? Kwete, haina chekuita nekambani kana webhusaiti, asi zvine chokwadi chekuseka.
Pakutanga, peji rekukanganisa reNPR rinoita kunge risingakoshe. Asi ramba uchiverenga uye iwe uchaona kuti nehungwaru vanobatanidza kune dzimwe dzenyaya huru dzevanhu vakarasika vanhu, nzvimbo, uye zvinhu, sechidimbu paAmelia Earhart uye chimwe paWaldo. Izvi zvinogona kungoita kuti vashandisi vakarasika vanzwe kushoma vari vega.
Pakati anotora nzira yakafanana kune iyo NPR's 404 peji, ichikurudzira zvinyorwa nezve kurasika uye kurasikirwa nezvinhu. Tarisa izvi zvinyorwa kunze kana iwe uine nguva - iwo akanaka kuverenga.
HomeStarRunner.com, imba kune Flash-animated katuni akateedzana, anga aine akateedzana eanosekesa 404 mapeji ekukanganisa pamusoro pemakore. Iwo achangoburwa maficha mavara kubva kukatuni dzakateedzana mune chiitiko chaigona kuve chakabuda chakananga kubva kune imwe yezvikamu zvavo. Kana iwe ukavhura ruzha paunorodha peji, unonzwa hunhu hwavo Strong Bad - inozivikanwa nekupopota mitsara zvinonzwika - ichiti, "404'd!"
Heano zano rakareruka rinoguma rakatarisa rakatsetseka: Blizzard Entertainment's 404 peji inoratidzira hunhu hunhu hwakarasika mune chaiyo blizzard uye kumwe kuseka uko World of Warcraft vateveri vanozokoshesa.
39. Mhoro Big Idea
Rwendo runokurumidza kutenderera kushambadzira uye vezvenhau vezvemagariro Mhoro webhusaiti hombe webhusaiti inokuudza izvo zvaunoda kuti uzive pamusoro payo yakashinga uye isina kujeka maitiro ekopi. Uye, hongu, iyo 404 peji rekukanganisa haina kusara.
Zvinoitika kwatiri, zvakare! Iyi ndiyo meseji yatinosimudza kutaurira vashanyi vesaiti yedu kuti pane zvimwe zvinonetsa pawebhusaiti. Chinangwa chedu chaive chekuramba takatendeka Izwi raHubSpot nokuva anodikanwa, anonzwira tsitsi, uye anobetsera sezvinobvira.
Chinja 404 Yekukanganisa Peji Kuti Uve Inofadza Nguva
Hapana munhu anoda kumhara pane 404 peji - ivo vanotsamwisa uye vasingatarisiri. Nekudaro, iwe haugone kunyatsovadzivisa, saka inogara iri zano rakanaka kuti uve ne404 peji rekudzokera pane yako webhusaiti.
Uye, kubva pane ruzivo rwevashandisi, peji rako makumi mana rinofanira kunge riri diki rekumhanyisa, kwete rusvingo rwezvidhinha. Iyo chaiyo dhizaini inogona kuve mutsauko pakati pekushungurudzika bounce uye nekugona kushandurwa, saka wadii kuita kuti zvinakidze?
Nongedzo yekushandisa inopindirana 404s kusimudzira SEO yako
Maitiro ekugadzira iyo yakakwana 404 peji
Yakanakisa Webhu Dhizaini Services
Yekupedzisira Nongedzo kuGoogle Kutsvaga Console muna 2021